के तपाई पिडामा हुनुन्छ ? पीडामा हुनुन्छ भने यस्ताे गर्नुहाेस् - हिपमत
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ ।मेरो एउटा साथीको ब्रेक-अप भयो । केही दिन ऊ निकै तनावमा रह्यो कैयौँ प्रयास गर्दा पनि तनावबाट बाहिर निस्कन नसकेपछि उसले मलाइ सबै कुरा बतायो । त्यसपछि ऊ निकै बेर रोयो । जब सबैकुरा पोखेर आँशु बगायो, तब उसले हलुका महसुस गर्यो र केही दिनमा तनाव मुक्त भयो ।
एकजना महिला हाम्रो शिक्षककहाँ परामर्शको लागि आएकी थिइन् । परामर्शको तीनवटा शत्रमा नै शिक्षकले उनलाई आफ्नो मनको कुरा पोख्न र रुनको लागि समय दिनुभयो । उनी तीन वटा शत्रमा आफ्नो सबै पीडा पखालिने गरि रोइन् । उनलाई पीडाले भित्र भित्रै खाएको थियो । त्यो तीनवटा शत्र सकिएपछि उनले हाम्रो शिक्षकलाई भनिन् , ” धन्यवाद ! मलाई यसरि रुने मौका दिनुभयो ।
अहिले त म आफूलाई बलियो लागिरहेको छ ।” अँध्यारो अनुहार लिएर आएकी उनी मुस्कान सहित बिदा भइन् । त्यसको केही दिनपछि मेरो साथीले सुनायो की उसको स्कुलदेखिको एउटा साथी पनि त्यसरी नै अहिले तनावबाट बाहिर निस्किएको छ ।
आफैले देखेका उदाहरणले गर्दा म पीडामा किन रुनु आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको हूँ । पीडामा रहेर मनोवैज्ञानिककहाँ आउने व्यक्तिहरुको लागि प्रयोग गरिने पहिलो थेरापी भनेको उनीहरुलाई अपनत्व महसुस गराएर रुन दिनु नै हुन्छ । यहाँ तिमी रुनु नै पर्छ भन्न खोजिएको होइन, तर भावनात्मक रुपमा कसरि स्वस्थ जीवन जिउने भन्ने बहस गर्न खोजिएको हो ।
मानिसको जीवनमा भावानात्माक कुरा अभिन्न पाटो हुन्, चाहे त्यो सुख होस् या दु:ख । हामी ती भावनाबाट भाग्न सक्दैनौं । भावना ती रंगहरु हुन् जसले हाम्रो जीवनलाई फरक फरक रंगले रंगाईरहेका हुन्छन् । तर हामी सकेसम्म सुखका भावनाहरुलाई अंगाल्ने र दु:खका भावनाहरुबाट भाग्ने प्रयास गर्छौं ।
हामी सोंच्छौँ कि, ती पीडा या दुखका भावनाबाट भागेर हामीले खुशीका साथ जीवन जिउन सक्छौं । तर हामीले बेवास्ता गर्दैमा, भाग्न खोज्दैमा हाम्रो मनमष्तिस्कमा भएका ती पीडाका भावना जाँदैनन् ।
कोठा फोहोर भएको छ । त्यो कोठालाई सफा देखाउनको लागि तपाईंले त्यो कोठामा भएको फोहोरलाई ढाकछोप गरिदिनुभयो भने के कोठा सफा हुन्छ ? त्यो फोहोर त्यहीं बसिराख्छ, त्यसले अनावश्यक रुपमा त्यो कोठाको ठाउँ ओगटेको हुन्छ । केही दिनपछि त्यो फोहोर सडेर कोठा गन्हाउने र आफैलाई रोगी बनाउने पनि हुनसक्छ । त्यसैले कोठा सफा गर्नको लागि त्यो फोहोर बाहिर फाल्नु नै पर्छ । हाम्रो दिमाग पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो ।
जसरि कोठा फोहोर भएको छ भन्ने लागेपछि तपाईं त्यो कोठा सफा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसरी नै सबैभन्दा पहिले यो स्विकार्नुहोस् कि, तपाईं पीडामा हुनुहुन्छ । तपाईंभित्र पीडाका भावनाहरु छन् । अब ती भावनाहरुलाई जबर्जस्ति ढाकछोप गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, भित्र दबाउने नगर्नुहोस् ।
तपाईंका ती पीडाका भावनालाई प्राकृतिक रुपले बाहीर आउन दिनुहोस् । सुरुमा तपाईंले त्यो पीडालाई बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो पीडा विस्तारै बढ्छ र चरम बिन्दुमा पुग्छ । जब पीडा चरम बिन्दुमा पुग्छ, तब त्यो बाहिर पोखिन थाल्छ । त्यो आफै पोखिन्छ, तर त्यसको लागि तपाईंले ती पीडालाई बुझ्न र समय दिन जरुरि हुन्छ ।
भावनाहरु कठीन हुन्छन् । हरेक व्यक्तिमा भावनाहरु फरक हुन्छन्, तिनले गर्ने असर फरक हुन्छन् र तीबाट निस्कने उपाय पनि फरक हुन्छन् । यो होइन कि, पीडा छ भने अहिले नै रुनुहोस् । तर आफ्नो पीडाबाट नभाग्नुहोस् । त्यसले झन् भयानक मानसिक स्थिति निम्त्याउन सक्छ । साथीलाई आफ्नो कुरा बताउन सकिन्छ भने बताउनुहोस् ।
यदि तपाईंलाई भित्र भित्रै ती भावनाहरुले सताएका छन् र तपाईंले त्यसलाई पोख्ने ठाउँ खोज्नुभएको छ भने मनोवैज्ञानिककहाँ जानुहोस् । तपाईं हरेक दिन तनावमा हुनुहुन्छ भने एकपटक परामर्शको लागि मनोवैज्ञानिककहाँ जानुहोस् । व्यक्ति शारीरिक मात्र होइन, मानसिक तथा भावनात्मक रुपले पनि स्वस्थ हुनु जरुरि छ ।
आँखाले दिन्छन् यस्ता गम्भीर रोगको संकेत, के कारणले आउँछ आँखामा समस्या ?
आँखामा देखिने सातातिना कमजोरीले ठूला रोगको संकेत दिइरहेका हुन्छन् । तर, हामीले कतिपय आँखाका कमजोरीहरुलाई बेवास्ता गर्छौं। यी समस्याअरु पछि गएर ठूलो समस्या बन्न सक्ने कुरामा डाक्टरहरुले सचेत गराएका छन् । यदि हामीले आँखामा देखिएका यी संकेतहरुलाई बुझेर समयमै उपचार गर्न सक्यौं भने ठूला रोगबाट बच्न सकिन्छ।
हरियो तरकारी, माछा आदिबाट आँखालाई चाहिने तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै नियमित व्यायामले शारीरिक प्रणालीहरुको सञ्चालन सुचारु गर्राई आँखामा पर्ने चाप कम गर्न सकिन्छ । हरियो सागसब्जी तथा व्यायामले मधुमेहका रोगीहरुको आँखा र स्वास्थ्यमा पनि लाभ पुग्छ ।
समय-समयमा गरिने नियमित जाँचले शरीरमा लागेको रोग छिटो पत्ता लगाउन सकिन्छ । आँखामा केही असर भएको महसुस भएमा तुरुन्त डाक्टरबाट परामर्श लिई उपचारतर्फलागिहाल्नुपर्छ । सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ भएमा आँखा पनि स्वस्थ हुन्छ ।
१. ब्रेन ट्युमरः आँखाने धमिलो देख्न, आँखाको रङ बदलिँदै जानु साथै टाउको दुख्नु, थकान र कमजोरी ब्रेन ट्युमरको लक्षण हुन सक्छ ।
२. मोतियाविन्दुः आँखाको नानीको रङ सेतो हुनु मोतियाविन्दुको लक्षण हुन सक्छ । यो रोगले आँखाको लेन्स बिग्रिने खतरा हुन्छ ।
३. कमलपित्तः आँखाको पहेंलोपना बढ्नु कमलपित्त (जण्डिस)को संकेत हो । यसले कलेजो बिगार्छ, रगत पहेंलो हुनुका साथै पाचनशक्ति कमजोर हुन्छ ।
४. मुटुरोगः शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्दा आँखाको ढकनीको दाग बस्न थाल्छन् । यो मुटुरोगको संकेत हुन सक्छ ।
५. एनिमियाः पूरै आँखा सेतो हुनु एनिमिया वा रगतको कमीको संकेत हुन सक्छ । यसो हुँदा थकान, कमजोरी, सास लिन मुस्किल हुने समस्या हुन्छ ।
६. कन्जंटिभाइटिसः आँखा रातो कुनु कन्जंटिभाइटिस नामको रोगको संकेत हुन सक्छ । यसले शरीरमा विभिन्न गिर्खा आउने इन्फेक्सन र एलर्जीजस्ता समस्या हुन्छ ।
७. थाइराइडः आँखा सुन्निनु वा बाहिर उठ्नु थाइराइडको लक्षण हुन सक्छ । यसले आँखामा तनाव पनि गराउन सक्छ ।
आँखामा आँसु आइरहने समस्या छ ?
आँखा मानवको महत्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले आँखाको स्वास्थ्यमा निकै ध्यान दिनुपर्छ । आँखा हेर्दा सानो हुन्छ तर त्यसभित्र समुद्रजस्तै विशाल हुन्छ । बच्चाहरू ४÷५ वर्षको हुनेबित्तिकै आँखा चेक गर्नुपर्छ । आफ्नो बच्चालाई स्याहार गर्दा आँखामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । चस्मा लगाउनुपर्ने छ भने लगाइदिनुपर्छ ।
बच्चाको दिमाग विकास हुने बेलामा के हुन्छ भने बच्चाले टाढा–टाढाको नदेखेपछि दिमागको विकास कम हुन्छ, त्यसैले चस्मा पनि लगाउनुपर्छ । मधुमेहको बिरामीले बर्सेनि आँखा चेक गर्नुपर्छ । जलबिन्दु जेनेटिक हुन्छ, परिवारमा कसैको छ भने ४० वर्ष उमेर नाघेपछि आँखा सबैले चेक गर्नुपर्छ ।
गर्मी समयमा आँखा चिलाउने एलर्जी हुन्छ । योे समयमा मोतिबिन्दु हुने बिरामी आउने गरेका छन् । मोति बिन्दु उपचार गरेर निर्मूल हुन्छ । सुगरको कारण पनि धेरै आँखाको समस्या आएको छ । यस्तो समस्या उपचार गरेर पूरै समस्या समाधान हुँदैन, कममात्र गराउँछ । मधुमेहको उपचार र आँखाको उपचार सँगसँगै गर्नुपर्छ । चिलाउने, पोल्ने सधैं नै हुन्छ ।
के हो मोतिबिन्दु ?
आँखाको भित्र लेन्स हुन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो कपालको रौं फुलेको जस्तै लेन्स पनि सेतो भएर फुल्छ । लेन्सबाट देख्नुुपर्ने हो तर सेतो भएपछि हेर्नलाई असर गर्छ । क्यामराको लेन्स बिग्रियो भने अर्को लेन्स हाल्नुपर्छ, त्यस्तै आँखाको पनि अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
लक्षण– आँखा हेर्न गाह्रो हुने, धमिलो हुने, रातिको समयमा गाडीहरुको हेडलाइट हेर्न नसकिने, घाममा वा कडा प्रकाश भएको ठाउँमा हेर्न नसकिने लक्षण हो ।
रोकथाम– उमेरको कारणले धेरै हुन्छ, यसलाई हामीले रोक्न मिल्दैन । खासै यसको रोकथाम गर्न उपचारबाहेक अरु केही छैन ।
आँखा पाक्ने- अरुबाट सर्ने, आफ्नै फोहोर हातले आँखा छुने गर्दा आँखा पाक्ने हुन्छ । कति मान्छेको आँखाभरि चाया हुन्छ, धेरैले राम्ररी मुख धुँदैनन् । यसले गर्दा आँखा पाक्छ । सधैं सफा रहने गर्नाले यसबाट बच्न सकिन्छ ।
आँखा किन चिलाउँछ ?
एलर्जी भएर आँखा चिलाउँछ । बाहिरको वातावरणबाट आउने धुलो, धुवाँ र अन्य कारणले यस्तो हुन्छ । हावाको माध्यमबाट पनि धेरै रोग आउँछ, आँखा पनि चिलाउँछ । आँखाको डिलमा आँसुको ग्रन्थीहरु हुन्छ, त्यो बन्द हुँदा आँशु आउँदैन, चिप्रा निस्किने गर्छ र त्यसले गर्दा चिलाउँछ ।
चिप्रा किन आउँछ ?
धेरै कचेरा आउन आँखा पाक्नुपर्छ । आँखा बाहिरी अंग हो, त्यसैले सबै धुलोको कणहरु पसेको हुन्छ, त्यसले कचेरा आउँछ । कसैको आँखा सुख्खा हुन्छ, त्यसले आसु आउँदैन, त्यो समयमा अर्कै खालको चिप्रा आउँछ । कुनै चिप्रा लामो तन्किने पनि हुन्छ । कति मान्छेहरुको आइरहने हुन्छ, यसो हुँदा आँखा सुख्खा भयो कि भनेर चेकअप गर्न जरुरी छ ।
अन्धोपनको सम्भावना- अन्धोपन मोतिविन्दुको समयमा उपचार भएन भने हुन्छ । मोतिविन्दु धेरै दिनसम्म राखिरह्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो फुट्छ र आँखामा गएर आँखा दुख्ने, पाक्ने हुन्छ । जलविन्दुले पनि अन्धोपन निम्त्याउन सक्छ । शरीरमा ब्लड प्रेसर भनेजस्तै आँखामा आँखाको प्रेसर हुन्छ, त्यो हामीलाई चाहिने भन्दा बढी भयो भने आँखाको नसालाई विस्तारै–विस्तारै सुकाउँदै जान्छ । त्यो नै जलविन्दु हो ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दा मधुमेहले गर्दा पर्दामा खराब गर्छ, पर्दामा सुनिने, रगत आउने गर्दा पर्दाको भित्रि अंग जहाँबाट हो हेर्नुपर्ने, त्यो ठाउँमा आक्रमण गर्छ । त्यसले पनि अन्धोपन हुन्छ । कुपोषणको कारण पनि अन्धोपन हुन्छ ।
९ महिना नपुग्दै जन्मेको बच्चामा आँखाको समस्या देखिन सक्छ । गर्भावस्थामा आमाले खाने औषधिको असरले पनि बच्चाको आँखामा समस्या आउन सक्छ ।
आँसु आइरहने समस्या– हाम्रो आँखाको साइडमा नली हुन्छ, त्यसको माथिल्लो भागबाट आँशु आउँछ । परेलाहरुको साइड साइडबाट बग्दै गएर नाकको डाँडीपट्टि सानो प्वाल हुन्छ, त्यो नली खुलेर नाकमा जान्छ अनि बन्द भयो भने ब्लक हुन्छ । त्यसपछि आँसु आइरहने समस्या हुन्छ । कसैलाई जन्मिँदै हुन्छ भने ठूलो व्यक्तिलाई पनि हुन्छ ।
कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम– यस्तो समस्याले अहिलेका बच्चाहरु सबैमा चस्मा लगाउनुपर्ने भएको छ । मोबाइल धेरै हेर्ने, फेसबुक चलाउने गर्दा आँखा सुख्खा हुने, टाउको दुख्ने, मसल्सहरु थाकेर टाउको दुख्ने हुन्छ । यसको लागि कम्प्युटर कम चलाउने, टिभी र मोबाइल पनि कम हेर्ने गर्नुपर्छ ।
यदि हेरिरहनुपर्ने छ भने पनि बेलाबेलामा चिम्म–चिम्म गर्नुपर्छ र कम्प्युटर चलाउँदा आफ्नो आँखाको तल्लो भागमा राखेर चलाउनुपर्छ । एन्टिरिफ्लेक्सन चस्मा लगायो भने पनि कम गर्न सकिन्छ । सकेसम्म १ मिटरको दुरीमा राखेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।
के कारणले आउँछ आँखामा समस्या ?
महिलाहरुमा हर्मोन परिवर्तन हुँदा आँखा सुख्खा हुन्छ भने बच्चाहरुमा बढी चोटपटकको कारण हुन्छ । ४० नाघेपछि जलविन्दु र ५०÷६० वर्ष नाघेपछि मोतिविन्दु हुने बढी छन् । महिलाहरुमा थाइराइडको कारण पनि आँखामा समस्या आउँछ ।
आँखाको चोटपटक, मोतिविन्दु, जलविन्दु, सुगरले पनि आँखाको पर्दामा असर गर्छ । कारखानाहरुमा सेफ्टी गगल्स नहुँदा धेरै समस्या लिएर आउँछन् । काठको कारखानामा काम गर्नेहरुको किलाहरु नै छिरेको समस्या लिएर समेत आउँछन् । बच्चाहरु खेल्छन्, यसले धेरै चोटपटक लागेर आँखामा समस्या हुन्छ ।
आँखा प्रत्यारोपण– आँखाको डल्लो निकालेर डल्लो नै राख्ने हैन । आँखाको नानी, पर्दामा घाउ भयो वा चोटपटक लागेर आँखाको अगाडिको भाग फुट्यो भने त्यो भाग निकालेर दान गरेको आँखा राख्ने हो । यसको लागि पैसा लाग्दैन । प्रोसेसको लागि मात्रै हो । दृष्टिविहीनहरुको लागि नेपालमा लो भिजन क्लिनिक छ, जहाँ आँखाको विशेष उपचार गरेर विशेष किसिमको चश्मा दिइन्छ ।